LOVE ISLAND ကြယ်ပွင့် SAM BIRD သည် TV ရုပ်သံကြယ် KAILAH CASILLAS နှင့်စေ့စပ်သည် - သတင်း
အိုကေပေမယ့် Love ကျွန်းကမှ Sam Bird ဟာစေ့စပ်ထားတယ်။ !
Sam Bird၊ ဂျော်ဂျီယာသံမဏိဖြင့် Love Island တွင်ထိုင်ပြီးတစ်ချိန်ကသီချင်းအချို့ကိုထုတ်လွှင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူကိုသင်ယခုသိပြီဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်
ဆမ်သည်နောက်ထပ်အဖြစ်မှန်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သည့် Kailah Casillas နှင့်ချိန်းတွေ့ရန်ရှစ်လကြာခဲ့သည်။ သူမသည်သူမကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးကြောင်းမနေ့က Instagram တွင်ကြေငြာခဲ့ပြီးသူမကဟုတ်ကဲ့ဟုပြောသည်! အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိ Sam နှင့် Kailah တို့သည် Instagram မှတစ်ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမသည်သူမ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုလှောင်ပြောင်နေသည်ဟုပြောပြီးနောက်တွင်
အမေရိကန်အဖြစ်မှန်တီဗီကြယ်ပွင့် Kailah သည် MTV ၏ The Real World: 2016 တွင် Go Big or Go Home တွင်သူမ၏ပွဲ ဦး ထွက်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး The Challenge သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ကျော့ပြန်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @kailah_casillas
ဒါပေမယ့်ကြွင်းသောအရာသည်သမိုင်းဖြစ်သည်။ Kaliah လက်စွပ်၏ပုံတစ်ပုံကိုတင်ခဲ့သည်: ငါကမ္ဘာပေါ်မှာငါ့အကြိုက်ဆုံးလူတစ် ဦး လက်ထပ်ထိမ်းမြား @samrobertbird
Sam သည်ဂရိနိုင်ငံ Zante တွင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေစဉ်တွင်မေးခွန်းကိုမေးနေပုံရသည်။ သူမလက်စွပ် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်သူမ၏ပုံကိုစာလုံးတစ်လုံးထဲတွင်ထည့်လိုက်သည်ဟူသောသတင်းကိုလည်း Sam ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ သူမကမှတ်ချက်ပေးသည့်အပိုင်းတွင်ဤသို့ပြန်ပြောခဲ့သည် -“ ဒါဟာအိပ်မက်တစ်ခုလိုခံစားရတယ်။ မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @samrobertbird
ဆမ်သည် Love Island 2018. တွင်ကသောင်းကနင်းနိုင်သောအချိန်ရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဂျော်ဂျီယာသံမဏိနှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီးသူမနှင့်အတူဗီလာမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူမသူ့ကိုလှည့်စားခဲ့သည့်ကောလာဟလများကြားတွင်သူတို့သည်မကြာမီတွင်သူတို့ကွဲသွားခဲ့သည်။
facebook ပေါ်မှာပရိုဖိုင်းကိုပါ pic post ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်
ဆမ် Bird ယခုစေ့စပ်နေသည်။ wow ဘာတစ်နှစ်။ မင်္ဂလာပါ။
• Chris Hughes သည် Instagram model Mary Bedford နှင့်ချိန်းတွေ့သည်
• ဤသည် Love ကျွန်းစီးရီးလေးသွန်းယခုမှတက်ကြသည်အရာဖြစ်တယ်
• Handle To Fransca သည်အလွန်ပူသည်မတ်ေတာမှ Damian နှင့်လက်မထပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်
Instagram မှတစ်ဆင့်ပုံရိပ် @kailah_casillas ။